Wararka - Ku soo biir ciidamada si aad ula dagaallanto xaaladda cudurka faafa
Gelinkii dambe ee Febraayo 12, Rao Jianming, Xoghayaha Kooxda iyo gudoomiye ku xigeenka fulinta Jiangxi ee Xiriirka Ururada Shaqaalaha, ayaa si qoto dheer ugu galay caafimaadka Sanxin si loo baaro kahortaga iyo xakamaynta shaqada, isla waqtigaasna wuxuu diray 50000 yuan lacag qaboojinta. Zhang Yilin oo ah gudoomiyaha maareeyaha guud ee shirkada ayaa warbixin ka siiyay gudoomiyaha shirkada Peng Yilin howlaha shirkada. Wuxuu sidoo kale xubin ka ahaa Guddiga Joogtada ah ee guddiga guud ee ururada shaqaalaha ee Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha, Mudane Wu Yufeng, oo ah guddoomiye ku-xigeenka Guddiga Joogtada ah ee guddiga guud ee Xisbiga ee Golaha Shacabka ee Jamhuuriyadda Shiinaha, gudoomiye ku xigeenka Gudiga Joogtada ah ee gudiga guud ee ururada shaqaalaha ee jamhuuriyada Shacbiga Shiinaha ee ay khusayso khusayso ayaa lasocday baaritaanka.
Kadib markii uu baaray goobta, Xoghaye Rao Jianming wuxuu aad uga walwalsanaa amaanka shaqaalaha shirkada. Ugu horreyntii, wuxuu weydiiyay tallaabooyinka ay shirkaddu qaaday si looga hortago loona xakameeyo xaaladda cudurrada faafa, iyo inta shaqaale ee ku soo noqday shaqadooda, gaar ahaan khadka wax soo saarka. Zhang Lin oo ah gudoomiyaha ururka shaqaalaha ee shirkada ayaa mid mid uga warbixiyay warbixin faahfaahsan. Iyada oo gacan ka heleysa iyo hagida waaxyaha ay khuseyso ee magaalada iyo degmadu (Aagga Horumarinta), shirkaddu waxay si rasmi ah dib ugu bilawday soo saarista dialysate, dialyzer iyo irbadda tallaalka laga bilaabo 31-kii Janaayo.
Ka dib markii aan dhageystay warbixinta shaqada ee shirkadda ee ku saabsan maaraynta adag ee shaqaalaha gudaha iyo dibedda, ogaanshaha heerkulka maalin kasta ee shaqaalaha, xoojinta faafinta ka hortagga iyo xakamaynta aafada iyo kormeerka goobta, Xoghayaha Rao Jianming wuxuu si aad ah u xaqiijiyay ruuxa isxilqaan shaqaalaha safka hore ee shirkadda ee ka hortagga cudurrada faafa, waxayna ku boorriyeen qof walba inuu fiiro gaar ah u yeesho ilaalintiisa uuna sugo ammaankooda.
Intii lagu guda jiray baaritaanka iyo tacsida, xoghaye Rao Jianming wuxuu carabka ku adkeeyay: waa inaan ku dhexgalno fikradaheena iyo ficilkeena ruuxa xoghayaha guud Xi Jinping khudbadiisa muhiimka ah, kor u qaadida wacyiga guud iyo guud ahaan dareenka, iyo inaan si adag u qabsano masuuliyada kahortaga iyo xakameynta faafa. isu keenida ciidan xoog leh oo la dagaallama cudurka faafa. Dadaal wada jir ah iyo dadaal wadajir ah, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku guuleysano dagaalka ka dhanka ah ka hortagga iyo xakameynta cudurrada, oo aan ilaalino nabadgelyada iyo nolosha dadka.